सम्बन्ध विच्छेद गरी छुट्टै बसेकी श्रीमतीले श्रीमानलाइ मध्यरातमा फोन गर्दै भनिन्, ‘ए.. हजुर ! प्रेसरको दबाइ लिइरहनुभएको छ नि ?’ - सिधा मिडिया
१ बैशाख २०७९, बिहीबार २१:०२ मा प्रकाशित
हरेक मध्येरातमा एक नम्बरबाट उनलार्ई मिसकल आइरहेको हुन्छ, तर कसको नम्बर होला भनी उनी फोन फर्काउँदैनन् बरु कसैको नम्बर झुक्किएर आयो होला भन्ने सोच्छन् । एक दिन होइन दुई दिन, तीन दिन लगातार मिसकल आइरहेको हुन्छ । सातौँ दिनको मध्यरातमा फेरि मिस कल आउँछ र उनकी छोरीले ‘बाबा हजुरको नम्बरमा मिलकल आइराछ’ भन्छिन्,।
बच्चाहरू झस्किन्छन् । ‘बाबा.. किन मामुले हजुरलाई मिसकल गरेको ? उहाँले हजुरसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर अर्कैसँग विवाह गर्नुभएको होइन र ? हामीलाई थाहा छ । अहिले किन मिसकल गरेर दुःख दिएको होला ?’छोराछोरीको कुरा सुनेर बाबा भन्छन्, ‘हेर.. तिम्री आमाको सम्बन्ध मसँग विच्छेद भएको हो तिमीहरूसँग होइन, आमा हो! तिमीहरूले मानमर्यादा राख्नैपर्छ ।’
तर छोराछोरी कुनै हालतमा मान्दैनन् । ‘कस्तो दुःखमा बाबा हजुरलाई मामुले छोडेको हो हामीलाई थाहा छ, फेरि पनि हजुर हामीलाई सम्मान गर्न सिकाउनुहुन्छ !’ छोरी रिसाएजस्तो भाव प्रकट गर्दै भन्छिन् ।‘मलाई बिर्से पनि बिर्स तर आमालाई नबिर्स’- बाबाले भनिरहेका हुन्छन् । बच्चाहरू आफ्नो बाबालाई प्राणझैँ माया गर्छन्, बाबाको कुरा मान्छन् र बाबालाई अर्को विवाह गर्न सुझाव पनि दिन्छन् ।